पाैस महिनाको राशिफल पढ्नुहोस्, कस्तो छ ? - Muldhar Post
पाैस महिनाको राशिफल पढ्नुहोस्, कस्तो छ ?
धर्मदर्शन २०७४, ३ पुष सोमबार 896 पटक हेरिएको
मेष (चू ,चे, चो, ला, लि, लू, ले, लो, अ) मेष राशि भएकाहरुका लागी नवौ भावमा गोचर गर्ने सूर्यले कामहरु बिग्रने हुँदा मान सम्मान तथा ईज्जत प्रतिष्ठामा कमिको महशुष हुनेछ । राजनिति तथा समाजसेवामा जनताबाट आलोचना सहनुपर्ला । कार्यक्षेत्रमा तपाईको निर्णको चर्को बिरोध हुनसक्छ अलि बढि ध्यान दिनुहोला । मान्यजन,मित्र तथा दाजुभाई सँग विवाद सिर्जना हुनेछ भने स्वास्थ्यमा समस्या बढ्नेछ । मनमा अशान्ति पैदा हुनुका साथै आए आर्जनमा कमि हुनेछ । महिनाभर जसो आठो भावमा गोचर गर्ने बुध तथा शुक्रले व्यापार व्यावसाय बिशेष गरि फैन्सि तथा बिलाशि बस्तुहरुमा लगानि गर्न सक्दा मनग्गे आम्दानि हुनेछ । नसोचेको धन तथा स्थाई सम्पति प्राप्त हुनेछ भने आर्थिक पाटाहरु जबभुत हुनेछ । भौतिक तथा बिलाशि बस्तु प्राप्तिको गतिलो योग रहेकोछ । कुटुम्बबाट आवस्यक सहयोग प्राप्त हुदा मन प्रशन्न रहनेछ । भने बिद्यार्थिहरुले अध्ययनमा सफलता प्राप्त गर्नेछन् । महिनाभरिनै सातौ भावमा गोचर गर्ने मंगलले जीवन साथिसँग मनमुटाब बढ्ने योग रहेकोछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ, वा, वी, वू, वे, वा) समयमा काम नबन्ने तथा ऋण लाग्ने हुँनाले मानसिक तनाब बढ्नेछ । हतियार,फलाम तथा आगो सँग सम्बन्धित काम गर्दा वा प्रयोग गर्दा हासियारि अपनाउँनु होला चोटपटक लाग्न तथा दुर्घटना हुँन सक्छ । स्वास्थ्यमा बिशेष गरि हाडजोर्नि,मुटु,आखा तथा दातमा समस्या देखिने हुदा उपचार खर्च बढेर जानेछ । महिनाभर जसो सातौ भावमा गोचर गर्ने बुध तथा शुक्रले माया प्रेममा आत्मियताको कमि हुनेछ तथा पति पत्निबिच अबिश्वास सिर्जना हँुनेछ । समय तथा परिस्थिति अनुशार नचल्नाले दुख पाईनेछ भने समयमा काम सम्पन्न नहुँदा आर्थिक ब्याबस्थापन गर्न गाह्रो हुनेछ । साझेदारि व्यावसायमा लगानि नवढाउँनु उचित हुनेछ किनकि साझेदारहरु बिच मनमुटाब सिर्जना हुन सक्छ । बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा सन्तोषजनक प्रगति गर्न सकिनेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धि सामान्य समस्या आउँने हुनाले खानपानमा ध्यान दिनुहोला । यात्रा गर्दा ख्याल गर्नुहोला बाटामा बिभिन्न समस्याहरु आईलाग्नेछन् । छैठो भावमा गोचर गर्ने मंगलले भने केहि शुभ संकेतहरु प्रदान गर्नेछ । सत्रु परास्त हुनेछन् भने व्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा आउनेछन् । खनिज पदार्थको कारोबार फस्टाएर जानेछ ।
मिथुन (का, की, कू ,घ, ङ, छ ,के,को,हा) मिथुन रासि हुनेहरुलाई महिना भरिनै सातो भावमा गोचर गर्ने सूर्यले जीवन साथि सँग बिवाद तथा मनमुटाब सिर्जना हुनेछ । यात्रा गर्दा ख्याल गर्नुहोला कष्टकर यात्रा हुनेछ । राज्यबाट भनेजस्तो पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नको लागि निकैनै मेहनेत गर्नु पर्नेछ । कार्यक्षेत्रमा सहकर्मीहरु सँगै राय बाजिनेछ । महिनाभरुनै पञ्चम भावमा गोच गर्ने मंगलले सन्तान तथा छोराछोरिको स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ भने सत्रुले बारम्बार दुख दिनेछन् । महिनाभर नै छैटो भावमा बस्ने बुध तथा शुक्रले व्यापार व्यावसायमा लगानि गरि मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ । उत्तम भोजन तथा मन परेको बस्त्र प्रयोग गर्न पाउदा मन हर्सित हुनेछ । अध्ययनमा मन जानेछ मने राम्रो तथा बौद्धिक किताबहरु पढ्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । कला तथा साहित्यको क्षेत्रमा लगानि गर्नेहरुले मनग्गे रुपैया पैसा कमाउन सक्नेछन् । भौतिक सम्पति तथा सवारि साधनको प्रयोग तथा परिचालन गर्दा ध्यान दिनुहोला अप्रिर्य घट्ना नघट्ला भन्न सकिन्न ।
कर्कट (ही, हू ,हे, हो, डा, डी, डु, डे, डो) यो महिना समय राम्रो रहेकोछ । प्रतिष्पर्धिहरुलाई किनार लगाउँदै आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउँन सकिनेछ भने बिवादित बिषयहरुको निर्णय तपाईकै पक्षमा आउँनेछन् । न्यायिक निर्णयहरु तपाई आफ्नै पक्षमा फैसला हुँने तथा सत्रुलाई परास्त गर्न सकिनेछ । राजनिति तथा समाजसेवमा जनताको गतिलो समर्थन पाईनेछ भने नोकरिमा बढुवा तथा राम्रो स्थानमा स्थानान्तरणको गतिलो सम्भावना रहेकोछ । अध्यानमा प्रगति हुँने हुदा सफलताको सिडि चुम्न सकिनेछ । व्यापार व्ययावसायमा लगानि बढाई आम्दानिका बाटाहरु फराकिला बनाउँन सकिनेछ भने शेयर बजारमा तथा बित्तिय क्षेत्रमा गरिएको लगानि बाट मनग्गे आम्दानि हुनेछ । माया प्रेम तथा रोमान्सको क्षेत्र स्वत स्फुर्त बलियो बन्ने योग रहेकोछ । चौथो भावमा गोचर गर्ने मंगलले भने छाति सम्बन्धि समस्या आउनेछ । आमाको स्वास्थ्यमा समस्या ल्याउनेछ भने घरेलु जीवनमा सुखको कमि महशुष हुनेछ ।
सिहं (मा, मी, मू , मे, मो, टा, टी, टू ,टे) सरकारि तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्दा सजक रहनुहोला तपाईको खुट्टा तान्नेहरु सक्रिय रहनेछन् । नितिनिर्माण तहमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्बाह गर्नुपरे पनि बिपक्षहरु बाट आलोचनाको शिकार होईनेछ । भौतिक सम्पतिको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्न । तृतिय भावमा गोचर गर्ने मंगलले शाहस तथा पराक्रम बढेर जानेछ भने न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षम फैसला हुनेछन् । भौतिक सम्पति तथा खनिज पदार्थको व्यापारबाट मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ । तार्तिक क्षमतामा बृद्धि हुने हुदा बौद्धिकतामा बृद्धि हुनेछ । चौथो भावमा गोचर गर्ने शुक्र तथा बुधले घर जग्गा तथा सवारि साधनको खरिद बिक्रिबाट मनग्गे धन तथा सम्पति कमाउन सकिनेछ । ईच्छित चाहना तथा मनोकामनाहरु पुरा हुनेछन् भने शरिर तथा मन प्रफुल्लित हुनेछ । आफन्त तथा आमा बाट तपाईको काममा महिना भर नै सहयोग हुनेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पु,ष,ण,ठ,पे,पा) महिनाभरनै चौथो भावमा गोचर गर्ने सुर्यले घर जग्गा तथा सवारि साधनको कारोबार गर्दा ध्यान दिनुहोला घाटा लाग्ने योग रहेकोछ । राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको आलोचनात्मक समर्थन प्राप्त हुनेछ । तेस्रो घरमा गोचर गर्ने शुक्रले दाजुभाई तथा छिमेकीहरुबाट भनेजस्तो सहयोग प्राप्त हुनेछ । ट्राभल तथा यात्रा सँग सम्बन्धित व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । लामो तथा छोटो दुरिको यात्रा हुने प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ । खेलकुट तथा खेलकुद सँग सम्बन्धित काममा समय दिनेहरुले नाम तथा दाम दबै कमाउन सक्नेछन् । दोस्रो भावमा गोचर गर्ने मंगलले आगो तथा फलाम सँग सम्बन्धित काम गर्दा ध्यान दिनुहोला अप्रिय घट्ना नघट्ला भन्न सकिन्न । कठोर बचन बोल्दा कामहरु बिग्रन सक्छ ध्यान दिनुहोला । प्रेम प्रशङगमा आत्मियताको बढोत्तरिको योग रहेकोछ । कृषि सहकारि तथा पशुपालन व्यावसाय फस्टाएर जाने योग रहेकोछ ।
तुला ( रा, री रु, रे, रो, ता, ती, तू ,त) समग्रमा महिना राम्रो रहेको छ । समाजका उच्च पदस्थ ब्याक्तिहरु सँग सहकार्य गरि नँया नँया काम गर्न सकिनेछ । राजनिति तथा कुनै पनि प्रतिष्पर्धामा प्रतिष्पर्धिहरुलाई पछि पार्दै पद प्राप्त हुनेछ । सत्रु परास्त हुनेछन् भने न्यालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् । घर जग्गा तथा सवारि साधन प्राप्तिको योग रहेको छ भने फलाम तथा ईञ्जिनसँग सम्बन्धित कामहरुबाट मनग्ने आम्दानि गर्न सकिनेछ । आकस्मिक लाभ हुनेछ भने भौतिक सम्पति तथा सवारि साधन प्राप्तिको योग रहेको छ । बाधा अवरोधहरु स्वत हटेर जानेछन् । शेयर बजार तथा सट्टाको ब्याबसायबाट मनग्गे आम्दानि गर्न सकिनेछ । बौद्धिक कार्यमा सहभागि भई आफ्नो गतिलो प्रश्तुति पस्कने अवसर प्राप्त हुनेछ भने बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा प्रतिश्पर्धिहरुलाई उछिन्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ । परिवार तथा सन्तान बाट तपाईले गरेको काममा उल्लेख्य सहयोग हुनेछ । ब्यापार ब्याबसायमा लगानि बढाउँदा लामो समय सम्म आम्दानि भईरहेनछ । प्रेम गर्ने जोडिहरुले एक अर्का बिच भावना साटासाट गरि समय ब्यातित गर्न सक्नेछन् ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू ,ने,नो,या,यी,यू) पढाई लेखाईमा प्रतिश्पर्धिहरुलाई हराउँदै नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिनेछ । सुन्दर तथा बिलाशि बस्तुहरुको प्रयोग मार्फत अरुको मन आफुतिर लोभ्याउँन सकिनेछ । उत्तम बस्त्र,मनपर्ने भोजन तथा बिशेष उपाहार प्राप्तिको योग रहेकोछ । बिभिन्न अवसरले पछ्याउँनेछन् भने चाहेको समयमा कामहरु सम्पन्न हुँने हुँदा आफन्तहरु खुसि हुनेछन् । प्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसिलो भएर जाने तथा दाम्पत्य जीवन सुखि रहनेछ । राजनिति तथा समाजसेवामा दोस्रो घरमा गोचर गर्ने सूर्यले जनताको साथ तथा समर्थन पाउन निकैनै समय खर्चनु पर्नेछ । समय र परिस्थितिको राम्रो सँग अध्ययन गरेर मात्र आफ्ना कुरा राख्नुहोला तपाईको प्रस्तुति सहि ठाउँमा नहुन पनि सक्छ । निर्णायक पदमा हुनुहुन्छ भने कुनै पनि निर्णय गर्दा ध्यान दिनु जरुरि देखिन्छ । बाह्रो भावमा गोचर गर्ने मंगलले लामो दुरिको यात्रा हुनेछ भने स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ ध्यान दिनुहोला ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) एकादश भावमा गोचर गर्ने मंगलले दाजुभाई तथा आफन्तबाट भनेजस्तो सहयोग पाईने हुदा मन प्रफुल्तिल हुनेछ । खनिज पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग मार्फत आम्दानि बढाउन सकिनेछ भने पहिलो भावमा गोचर गर्ने सूर्यले राजनिति तथा सामाजिक बिषयको उठान गर्दा अलि बढि अध्ययन तथा अनुशन्धान गरि प्रस्तुत हुँनुहोला किनकी प्रतिश्पर्धिहरु तपाईभन्दा बलिया हुँन सक्छन् । राम्रो काम गर्दा गर्दै गलत आक्षेप लगाउनेहरु हाबि हुनेछन् भने कार्यक्षेत्रमा तपाईको आलोचना गर्नेहरु सक्रिय हुनेछन् । समस्या समाधानका लागी चालिएका कदमहरु निअर्थक हुनेछन् भने तपाई आफ्नै कमजोरिले आत्मिय साथि तथा ईष्टमित्रहरु टाडिन सक्छन् । व्यापार व्यावसाय बढिनै संघर्ष गर्नु पर्नेछ भने आर्थिक अभावले कामहरु रोकिनेछन् । प्रेम प्रशङगमा सामान्य मनमुटाब सिर्जना हुँन सक्छ ध्यान दिनुहोला । बिलाशी सामानको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला नराम्रा घटनाहरु घट्न सक्छन् ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो, ख, खी, खू,खे, खो,गा,गी) लामो दुरिको बैदेशिक यात्राको तय हुनेछ । बैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यापार व्यावसायबाट प्रसस्त आम्दानि हुनेछ भने स्वदेशि उत्पादनमा नाफा कमाउँन अलि बढि समय खर्चनु पर्नेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धि सामान्य समस्याले सताउनेछ भने शरिरमा आलस्यता तथा अल्छिपना बढेर जानेछ । शैद्धान्तिक बिषयमा आफन्त तथा अग्रज ब्याक्तित्वहरु सँग बिवाद सिर्जना हुनेछ भने मान सम्मान तथा प्रतिष्ठामा कमिको महशुस हुनेछ । बिद्यामा सफलता पाउन निकै नै संघर्ष गर्नु पर्नेछ । मान्यजनहरुको सुझाबलाई हुँबहु लागु गरेर अगाडि बढे केहि मात्रामा लाभ हुनेछ । कार्यक्षेत्रमा काम गर्दा ध्यान दिनुहोला तपाईको आलोचना गर्नेहरु सक्रिय हुनेछन् । एकादश तथा बाह्रो भावमा गोचर गर्ने बुध तथा शुक्रले व्यापार व्यावसायमा बृद्धि हुनेछ भने आम्दानिमा बढोत्तरीको योग रहेकोछ । बंश बृद्धिको योग रहेकोछ भने शिक्षा तथा बित्तिय क्षेत्रमा गरिएको लगानि फस्टाएर जानेछ ।
कुम्भ (गू ,गे,गो,सा,सी,सू ,से,सो,दा) राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको साथ तथा समर्थन प्राप्त हुँने हुँदा पद प्राप्तिको योग रहेकोछ । सरकारि धन सम्पति तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग मार्फत आम्दानिका स्रोतहरु फराकिला पार्न सकिनेछ । बिद्या तथा प्रतिष्र्धामा बिजय हुँने योग रहेकोछ भने नयाँ ज्ञान हासिल हुनेछ । बुवा वा बुवासरहका मानिसको आषिर्वाद तथा सहयोगले महत्वपुर्ण कामहरु सम्पादन हुनेछन् । माया प्रेममा नजिक भई आफ्ना कुराहरु दिल खोलेर राख्न सकिनेछ । उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सकिने हुँदा ईच्छा आकाक्षा तथा मनोकामना पुरा हुँने समय रहेकोछ । लामो दुरिको धार्मिक तथा शैक्षिक यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ भने नया कुराको खोज तथा अनुशन्धानमा पहिना व्यातित गर्न सकिनेछ । आफ्नो पहिचान तथा परम्पराको जगेर्ना गर्ने कामका समय लगानि गर्दा सम्मान पाईनेछ । जीवन साथिको सहयोगले महत्वपुर्ण कामहरु फत्ते गर्न सकिने हुदा आर्थिक रुपमा सम्पन्न होईनेछ ।
मीन (दी,दू ,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) प्रसाशनिक क्षेत्रमा सामेल भई सामाजिक काम गर्ने अवसर प्राप्त हुँँने हुँदा मान सम्मान तथा ईज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि भएर जानेछ । निति निर्माण तहमा तपाईको सम्मानजनक उपस्थिति रहनेछ भने यो महिना गरिने निर्णयहरु सबैलाई मान्य हुनेछ । पढाई लेखाईमा प्रतिश्पर्धिहरुलाई किनारा लगाउँदै नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिनेछ । पति पत्नि बिचको सम्बन्ध सुदृड हुँनुको साथै माया प्रेमको गाठो गसिलो भएर जानेछ । गित संगितमा बिषेश रुचि बढ्नेछ भने पारिवारिक जमघटमा सहभागि भई मिठो मसिनो भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । लामो दुरिको अफिसियल यात्रा हुनेछ भने धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रमा मन जानेछ । बिलाशी तथा फेन्सि बस्तुको व्यापार व्यावसायमा बृद्धि हुनेछ भने सरकारि कार्यालयमा सामान सप्लाई गरि मनग्गे आम्दानि गर्न सकिनेछ । समाजको मन जित्ने काम गर्ने अवसर जुर्ने हुँनाले मान सम्मान तथा ईज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि भएर जानेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायबाट राम्रै आम्दानि गर्न सकिनेछ ।